Fampisehoana momba ny sakafo: ezahina hampitomboina ny vokatra biolojika - ewa.mg
News - Fampisehoana momba ny sakafo: ezahina hampitomboina ny vokatra biolojika
Nanomboka, omaly eny
Antaninarenina hatramin’ny 31 jolay 2021, ny varotra fampisehoana
momba ny sakafo vita amin’ny vokatra malagasy. Asongadina
amin’izany ny vokatra biolojika, nomen-dRtoa Rakotoniaina Marinà,
talen’ny fanohanana ny agribusiness, fanazavana bebe
Taorian’ny hetsika momba ny asa
tanana, iray volana lasa izay, homena toerana koa ny vokatra
sakafo, hanohanana ny tantsaha malagasy mpamokatra sy
hampiroboroboana ny fandraharahana avy amin’ny vokatry ny fambolena
sy ny fiompiana. Mikarakara izao hetsika kanton’i Gasikara izao ny
Chez Elle, iarahana amin’ny minisiteran’ny Fambolena, ny fiompiana,
ny jono, sy ny tetikasan’ny fiadidiana ny Repoblika. Hita amin’ity
fampisehoana ity ny sakafo vita amin’ny akora fototra avy eto
an-toerana. Tanjona ny hanandratana ny vita malagasy.
Asongadina ny vokatra biolojika,
mbola vitsy mpahafantatra eto amintsika, ary mbola vitsy koa,
manodidina 70 000, ny mpamboly vokatra biolojika, manana
fanamarinana ara-dalàna. Anisan’ny vokatra biolojika mampalaza an’i
Madagasikara eo amin’ny tsena iraisam-pirenena ny lavanila, ny
kakao, ny makamba, mahatonga ireo vokatra ireo ho ambony ny tinady
any amin’ny tsena iraisam-pirenena.
“Eo am-pamolavolana paikady
izao hampitomboana ny vokatra biolojika eto Madagasikara, tsy
amin’ny zezika ihany, fa eo koa ny masomboly. Mpiara-miombona
antoka amintsika ny FAO amin’ny fanamboarana bokin’andraikitra,
anisan’ny mpamatsy vola ny Banky iraisam-pirenena sy ny Vondrona
eoropeanina”, hoy Rakotoniaina Marinà. Na izany aza, tsy misy
akora simika amin’ny ankapobeny ny vokatry ny tantsaha
Ezahina tohanana ireo mpamokatra,
hanaraka ireo fenitra napetraka, toy ny fanajana ny
fotoam-piotazana, ny fitaovana fampiasa. Tsy mandeha ho azy anefa
izany fa miankina indrindra amin’ny toetr’andro sy ny tontolo
iainana, efa hita ny fiantraikany amin’ny tsy fahampian’ny
Manomana amin’ny fandraisana anjara
ny fivoriana an-tampony momba ny sakafo ataon’ny Firenena mikambana
(ONU) i Madagasikara, amin’ny septambra 2021. “Ampy ny sakafo eto
ambonin’ny tany ho an’ny mponina 7,8 miliara”, hoy ny ONU, saingy
820 tapitrisa ny misedra ny tsy fahampian-tsakafo, 144 tapitrisa ny
zaza latsaky ny dimy taona. Ahitana taratra izany eto Madagasikara,
indrindra ny any atsimo.
L’article Fampisehoana momba ny sakafo: ezahina hampitomboina ny vokatra biolojika a été récupéré chez Newsmada.
Santionan’ny fanitsiana ny lalam-panorenana :: Hofidiana ireo sefo fokontany sy Governora, hamboarina ny fanendrena Praiminisitra…
Fanontaniana maro no hipetraka amin’ ny fitsapan-kevi-bahoaka hoentin’ny fitondrana Rajoelina, raha afaka iray volana mahery kely. Manomboka mivoaka tsikelikely ny antsipiriany momba ilay didim-panjakana hikitihana ny Lalàm-panorenana izay nolaniana, sivy taona lasa izay, fony mbola Filohan’ny tetezamita, Rajoelina Andry. Hatramin’ny omaly hariva, tsy mbola nivoaka tamin’ny fomba ofisialy ny didim-panjakana mamaritra an’ireo andalana hasiam-panitsiana na andalana vaovao hiditra ao anatin’ny Lalàm-panorenan’ny Repoblika faha-IV. Isan’ireo voalaza fa hiova ny mikasika an’ireo lehiben’ny fokontany sy ny Governora ary ny fanendrena Praiminisitra. Fantatra nandritra ny tatitra nataon’ny minisitry ny Serasera sy ny kolontsaina sady mpitondra tenin’ny governemanta, Rakotondrazafy Lalatiana, omaly, tetsy Anosy, ohatra, fa: «santionany amin’ ny fanovàna hatao amin’ny Lalàm-panorenana ankehitriny, ny firosoana amin’ny fifidianana an’ireo lehiben’ny fokontany sy ireo Governora. Hamboarina kosa ilay andininy faha-54 momba ny fanendrena Praiminisitra ». Niverimberina tamin’ny fanazavana ny antony nahatapa- kevitra tampoka ny fitondrana amin’izao fanatanterahana fitsapan-kevi-bahoaka momba ny Lalàm-panorenana izao “ny fanomezana sy ny fitsinjarana ny fahefana amin’ireo vondrom- bahoaka eny ifotony”. Ho an’ny isam-pokontany dia: « ireo vondron’olona no hifidy ny lehiben’ny fokontany». Mialoha ny fifidianana ireo Governora indray, dia nolazain’ny minisitra fa: “hotendrena aloha izy ireo, araka ny fepetra manokana mba ho fanohizana vonjimaika ny fitantanan-draharaham-panjakana”. Filankevitry ny governora Hatreto aloha dia izay fanitsiana heverin’ny fitondram- panjakana fa hanohana mafy ny fanapahan-kevitra noraisin’izy ireo no tena re tamin’ny resaka nataon’ny minisitra Rakotondrazafy Lalatiana, omaly. Ankoatra ny tanjona amin’ny fampandrosoana isam-paritra, dia nofariparitany ny mikasika ny “ fisian’ny filankevitry ny governora, izay mbola vaovao amin’ny sofin’ny maro, ka hatao hamariparitana ny fitsinjarana asa eo amin’ny fanjakana sy ny faritra”. Hisoroka ny disadisa naterak’ilay andininy voarafitra tany am-boalohany momba ny fanendrena Praiminisitra ihany koa ny fitondrana Rajoelina, ka ny fanazavana azo dia: “famerenana ny fanoratana an’io andininy io mba tsy hisian’ ny fandikana azy amin’ny fomba hafa indray”. Eo ihany koa ny fanamboarana ny andininy faha-72 ao amin’ ny Lalàm-panorenana manambara ny ny fitsipika mifehy ireo depiote mba tsy hahafahany miovaova “palitao”sy “loko politika” ao amin’ ny Antenimierampirenena, toy izay nahateraka ny vondrona Mapar 1 sy 2 ary 3 tamin’ny efa-taona lasa. Andrasana ny didim-panjakana mamaritra an’ireo fanitsiana ny Lalàm-panorenana hifidianan’ny vahoaka ny “Eny”na ny “Tsia” amin’ny fitsapan-kevi-bahoaka hiaraka amin’ny fifidianana solombavambahoaka amin’ ny 27 mey ho avy izao ireo. Efa voaresaka ny fikasana handravana ny andrim-panjakana toy ny Anteni- mierandoholona. Ankoatra an’ireo fanakianana marolafy avy amin’ny mpanao politika sy antoko politika ary sehatra hafa manoloana an’ity fitsapan-kevi-bahoaka ity, dia nanamafy ny “maha-zava-dehibe an’izao fanovàna tian’ny Filohan’ny Repoblika hatao amin’ny Lalàm-panorenana izao” kosa ny Praiminisitra Ntsay Christian, omaly. “Tsy maintsy hirosoana izany, mba hampifanojo ny fandaharanasan’ny Filoham-pirenena sy ireo velirano nataony”, hoy izy. L’article Santionan’ny fanitsiana ny lalam-panorenana :: Hofidiana ireo sefo fokontany sy Governora, hamboarina ny fanendrena Praiminisitra… est apparu en premier sur AoRaha.
Kantopitia : mikasa hanampy ireo vehivavy manan-kilema
Vao tsy ela akory izay, nampiofana sy nizara fahalalana amin’ny fampivoarana ny tena sy ny fahaiza-mitarika i Kantopitia. Mpikambana mandrafitra ny biraon’ny fikambanana Sambatrattitude, mpianatra serasera “ communication” ny tenany. Ankoatra izay, mpisehatra sosialy ihany koa izy, ka mitantana ny tetikasa Zara fitia, zara tsiky, izay entina indrindra hanampiana ireo olona marefo ara-pivelomana sy mila tohana ara-tsaina. Nofinofiny rahateo moa izany hoe mba afaka hanampy ny sahirana zany ka dia noporofoiny tamin’ny hetsika tamin’ny volana desambra teo izany, fizarana sakafo ireo ankizy kely teny fokontanin’Ambondrona. Ankoatra izay, mpampiofana ihany koa, havanana amin’ny “Process communication”, fahalalana iray entina hamantarana ny “personnalité” an’ny olona, izay tena ilaina be eo amin’ny sehatry ny asa, eo amin’ny sehatry ny fifandraisana amin’ny olona samy olona, mora kokoa, hoy izy, ny miresaka rehefa fantatrao tsara ny toetran’ny olona resahinao. Miezaka mametraka ny maha izy azy eo amin’ny sehatry ny kolontsaina, indrindra ny ezaka anampiana ny fiarahamonina ny tovovavy. Manana tanjona hotratrarina i Kantopitia amin’ity taona ity, ny hanampiana ny mpiara-belona sy hanentanana azy ireo tsy ho kivy amin’ny fiainana.Tetikasany ato ho ato ny hanampy ireo vehivavy manan-kilema mba hivoatra kokoa amin’ny fiainana satria tsy sakana, hoy izy, ny fananana ny kilema. Manana ny tambajotran-tserasera facebook « Kantopitia Tsantamalala » ny tenany ho an’ireo maniry hiaraka hiasa sy hifanerasera aminy.NarilalaL’article Kantopitia : mikasa hanampy ireo vehivavy manan-kilema a été récupéré chez Newsmada.
Ady amin’ny kolikoly :: Miantso manokana ny Filoha ny vondron’ireo firaisamonim-pirenena
Mitaky ny hankatoavana sy hamoahana faran’izay haingana an’ilay lalàna mikasika ny fanagiazana ireo fananana azo tamin’ny tsy ara- dalàna ry zareo mpikambana ao amin’ny firaisamonim-pirenena. Manana fahefana misolo toerana ny solombavam- bahoaka amin’ny famoahana lalàna fehizoro ny Filohan’ ny Repoblika, amin’izao fotoana izao, ka antsoin’ireo firaisamonim-pirenena ireo mba handray ny andraikiny manandrify an’io volavolan-dalàna io. Tsy nety lany teo anivon’ ny Antenimierampirenena na dia nandalo fotoam-pivoriana intelo aza ny volavolan-dalàna mifandraika amin’izany. “Zava-dehibe ny famoahana ny lalàna momba ny harena azo tamin’ny tsy ara-dalàna satria sady porofo mivaingana maneho ny fahavononan-kiady amin’ny kolikoly no mampitombo ny fahatokisan’ ny vahoaka sy ny vondrona iraisam-pirenena amin’ny fitondrana ihany koa”, hoy Ramaroson Faraniaina, mpandrindra ao amin’ny hetsiky ny firaisamonim-pirenena Rohy. Nohamafisiny fa : “dingana lehibe amin’ ny fampandrosoana ny firenena ny tsy firaisana petsapetsa amin’ireo mpanao kolikoly sy ireo tambajotrany”. Nicoh Richman L’article Ady amin’ny kolikoly :: Miantso manokana ny Filoha ny vondron’ireo firaisamonim-pirenena est apparu en premier sur AoRaha.
Sekolim-panjakana: maimaimpoana ny fisoratana anarana
Nanamafy ny minisitry ny Fanabeazana fa maimaimpoana ny fisoratana anarana ho an’ny zaza hiditra an-tsekoly ho an’ny taom-pianarana vaovao 2020-2021 any amin’ny sekolim-panjakana. Tsy tokony haka vola amin’ny ray aman-dreny ny mpitantana ny EPP fa zavatra hafa mihitsy kosa ny latsakemboka hanarmana ny mpampianatra Fram alaina isaky ny ray aman-dreny isan-taona. Tsy miditra amin’ny fandaminana momba ny latsakemboka ny fanjakana fa tsy tokony hafangaro amin’ny fanoratana anarana izany. Ny 26 oktobra ny fisantarana ny taom-pianarana vaovao fa ny mpandraharaha sy ny mpampianatra mandray ny asa mialoha io fotoana io.Momba ny fanadinana CEPE any amin’ny faritanin’i Mahajanga sy i Fianarantsoa, nizotra tsara ny fiatrehan’ny mpiadina izany, omaly. Hanomboka anio ny fitsarana ny taratasim-panadinana rehetra. I Toamasina sy i Toliara no manarana ny fiatrehana ny fanadinana CEPE ny talata 15 septambra ho avy izao.Vonjy L’article Sekolim-panjakana: maimaimpoana ny fisoratana anarana a été récupéré chez Newsmada.
Fanadinana andrana CEPE: nanahirana ny mpianatra ny adina lazaolana
Nahatratra 85 72 ny isan’ny mpiadina, avy amin’ny EPP 93, tokony hiatrika ny CEPE andrana, ny talata lasa teo ho an’ny Cisco Antananarivo. 83 14 no tonga nanatrika izany ka 258 ireo tsy afaka nanatontosa. 1 975 tamin’ireo afaka tamin’ny andrana izay manome ny salanisa 23,75%, araka ny vaovao azo. Ambany be ny taham-pahafahana satria nataon’ny mpikarakara tena sarotra ny laza adina rehetra. Natao izany hahatsapan’ny mpiadina CEPE fa mety ho tojo zavatra ohatra izany izy ireo mandritra ny fanadinana. Fomba efa fampiasan’ny Cisco sy ny Zap izany hatramin’izay. Tsapa taorian’ny fitsarana fa mbola tsy voafehin’ny mpiadina ny taranja opérations et problèmes izay manahirana ny mpiadina hatramin’izay mihitsy matetika. Vokatra teny anivon’ny Zone d’administration pédagogique (Zap) 6 no tsara indrindra raha ratsy kosa ny teny anivon’ny ZAp 2 sy 3. Mbola hisy CEPE andrana manaraka eny anivon’ny sekoly isanisany. Taorian’ny andrana, afaka manarina ny lesoka samihafa sy manamafy ny taranja mbola marefo ny mpampianatra. Manana iray volana sy tapany ny roa tonta hamanafisana ny fahaizana. Manantena ny mpikarakara fa hiakatra ny taha ho an’ny andrana manaraka eo, izay hotontosaina ny 8 aogositra ho avy izao.Vonjy A. L’article Fanadinana andrana CEPE: nanahirana ny mpianatra ny adina lazaolana a été récupéré chez Newsmada.
Imeritsiatosika: any am-ponja ilay nandoro ny fiaran’ilay pasitera
Naiditra am-ponja ny lehilahy iray voarohirohy tamin’ny fandorana ny fiaran’ny mpitandrina Fjkm iray tao Imeritsiatosika, ny 21 mey lasa teo, taorian’ny fampanoavana. Voasambotry ny mpitandro filaminana tao an-toerana tsy lavitry ny nitrangan’ny fahamaizan’ilay fiara 4×4 Rexton an’i Pasitera andro vitsy taorian’ny nisian’ny voina ny lehilahy iray. Avy hatrany dia natao famotoroana teny amin’ny Borigadin’ny zandary teny Imeritsiatosika ny tenany ka nandritra izany no nahafatarana ny hevi-dratsiny. Tsy fifankahazoana teo amin’ny lasibatra no nahatonga azy nandoro ny fiara ary izao nampidoboka am-ponja azy izao. Raha tsiahivina, ny sasakalin’ny 16 hifoha 17 mey lasa teo no nirehatra noho ny antony tsy fantatra teo an-tokotanim-piangonana io fiaran’ny mpitandrina io. Taorian’izay nisy nampandre ny tompon’ny fiara fa mirehitra ny fiangonana ka nikoropaka nijery izany kinanjo ny fiara no nirehitra. Nijery ifotony ny zava-nisy ny zandary ary nanao ny fanadihadiana ka izao tratra izao ihany ny nikotrika izany ary niafara amin’ny famonjana azy.Tsiferana R. L’article Imeritsiatosika: any am-ponja ilay nandoro ny fiaran’ilay pasitera a été récupéré chez Newsmada.
Kitra : mety hantsoina handrafitra ny Barea indray i Dax
Efa mifantoka ao anatin’ny lalao fanomanana hiatrehana ny Elefantan’i Côte d’Ivoire amin’izay izao ny Barea de Madagascar. Miezaka mitady ny fomba rehetra hanatevenana ny ekipa ny mpanazatra, amin’izao fotoana izao.Na efa mivaha aza ny olana eo amin’ny lalao firahalahiana hatrehin’ny Barea de Madagascar, mbola misy baraingo goavana hatrany ny eo anivon’ny ekipam-pirenena malagasy, ankehitriny. Tsy ho ampy mantsy ireo mpilalao entina miatrika ireo fihaonana fanomanantena atao any Luxembourg, hiatrehana ny Swift Hesperange, ny 9 oktobra sy ny any Torkia, hifandonana amin’ny Kintana maintin’i Ghana, ny 12 oktobra 2020.Amin’izao fotoana izao, eo am-piketrehana ireo mpilalao hanatevina ny Barea de Madagascar, ireo ekipa teknika tarihin’i Nicolas Dupuis, mpanazatra. Hatreto mantsy, fantatra fa miisa efatra ireo mpilalao tsy ho afaka hanatrika ilay fampivondronana hatao any Luxembourg.Manoloana izany, mieritreritra ny hamerina ireo mpilalao fahiny ny mpanazatra. Anisan’ny goavana amin’ireny, izay hisolo an’i Abel Anicet, irakiraka mpanafika. Amin’izao fotoana izao, ao anatin’ny lisitra heverin’i Nicolas Dupuis fa tokony hantsoina indray Andriamirado Arohasina (Dax), mpilalaon’ny FC Black Leopard-n’i Afrika Atsimo. Efa tao amin’ny Barea de Madagascar ny tovolahy nandritra ny Can 2019, saingy nisy ny sazy nomen’ny federasiona iraisam-pirenena (Fifa) azy, taorian’izay ka voatery niato izy.Ankehitriny, afaka ny saziny ary efa miatrika ny fifaninanam-pirenena ao Afrika Atsimo, izy. I Dax, izay efa nanambara fa vonona hatrany hiaro ny voninahi-pirenena raha toa ka misy ilaina azy. Ankoatra azy, efa ao anatin’ny mpilalao fiandry ihany koa i Bakary Mario sy i Toavina Debakely, izay afaka maka tsara ny toeran’i Metanire, ihany koa. Any amin’i Nicolas Dupuis, izany sisa ny teny farany. Tsiahivina fa efa nanambara ny mety ho fiovan’ny lisitry ny Barea, amin’io lalao firahalahiana io, ity mpanazatra ity. TompondakaL’article Kitra : mety hantsoina handrafitra ny Barea indray i Dax a été récupéré chez Newsmada.